ဆရာမျိုးဟန်ကို - 2012 - March လ အတွက် ဗေဒင် ဟောစတမ်း ~ အလွမ်း မင်းသားလေး
ဆရာမျိုးဟန်ကို - 2012 - March လ အတွက် ဗေဒင် ဟောစတမ်း
02:59 နေဇော် လင်း No comments
ဒီလအတွင်း မိမ်ိဖြစ်ချင်တာတွေ မျှော်လင့် တာတွေ တွေ့ရလိမ့်မယ်။ နေရာသစ် ရရှိမည်။ အလုပ်အကိုင်များတွင် အထက်လူကြီးနဲ့ ပက်သက်ပြီး အခက်ကြုံနေရမည်။ လုပ်ငန်းကိစ္စများ အတွက် ဆုံးဖြတ်ရ ခက်နေသော အချိန်လေး ဖြစ်ပါသည်။ ငွေဝင်မည့် လမ်းစပေါ်မည်။ ငွေကြေးကိစ္စများတွေမှာ အဆင်ပြေနေမည်။
ငွေရဖို့ သေချာနေပြီ ငွေဝင်နေမည်။ ထွက်မဲ့ ကိစ္စတွေများနေမည်။ ခရီးယာယီတွေသွားမယ် ဆိုရင် မိမိရဲ့ အဖော်နဲ့ သွားပါ အကျိုးရှိပါသည်။ အလှူအတန်း နှင့် ဘာသာရေးကိစ္စများ အောင်မြင်လာမည်။ ပညာရေး ကြိ်ုးစားမှု အားထုပ်မှု နည်းနေမည်။ အချစ်ရေးမှာ ဆွတ်ပျံ့ဖွယ်ရာ အချစ်ဇတ်လမ်းလေး တွေ့ရမည်။ စန်းပွင့်လာမည်။
အိမ်ထောင်ရေးမှာ အခုအချိန်မှာ အတွဲညီနေမဲ့ အချိန်လေးပါပဲ။ ကျန်းမာရေး သင့်တင့်လေးပါ ခါးနာ ဒူးနာ ဖြစ်နေမည်။ ယတြာ = တနင်္ဂနွေနေ့ နေအိမ် ဘုရားတွင် ပန်း အနီရောင် ၇ ပွင့် တင်လှူ၍ လိုရာဆုတောင်းပါ။ အကျိုးပေးသော ဂဏန်း ။ ။4650
ဒီလတွေမှာ လိုချင်တာတွေ မရသေးဘူး။ မလိုချင်တာတွေ မရလာလိမ့်မည်။ အလုပ်အကိုင်တွေ အဆင်ပြေနေပေမဲ့ အလုပ်အတွက်နဲ့ စိတ်ညစ်နေရမည်။ အပြောင်းအလဲ တစ်ခုခုဖြစ်မည်။ ငွေကြေးအတွက်နဲ့ စိတ်ညစ်နေရမည်။ ရုက်တစ်ရက် ငွေကုန်ကျမှုများ ရှိပါသည်။
ဒီလတွေထဲ အနည်းငယ် စိတ်ညစ်နေရမည်။ငွေကြေးများကုန်ကျမှု များနေမည်။ ခရီးကိစ္စများ အဆင်ပြေမည်။ ပညာရေး ရည်ရွယ်ချက်များ အသစ်ပေါ်လာမည်။ အချစ်ရေးမှာ ချစ်သူနဲ့ အဆင်ပြေနေပေမဲ့ စကားပြောဆိုမှုများ အဆင်မပြေပဲ ဖြစ်နေမည်။ အိမ်ထောင်ရေးမှာ မတူညီပဲ စကားများနေရမည့် အချိန်လေးပါ။
ဒီလအတွင်း ကျန်းမာ ရေးမှာ ဦးခေါင်းပိုင်း ကျန်းမာရေးညံနေမည်။ ယတြာ = ကံကောင်းစေရန် အတွက် တနင်္လာနေ့ မိမိနေအိမ် ဘုရားတွင် မိမိမွေးနေတွင် ပန်းကန်ပြား တစ်ချပ်ပေါ်တွင် ဖယောင်းတိုင် ၁ တိုင်ထွန်း၍ လိုရာဆုတောင်းပါ။ အကျိုးပေးသောဂဏန်း ။ ။3479
ဒီလတွေမှာမိမိရည်ရွယ်နေသာ စိတ်ကူးများ အသေးအဖွဲ့ ကိစ္စလေးတွေ အရင်ပြည့်မှာပါ။ အလုပ်ကိစ္စများ ရှိနေပါက အမြန်ဆုံး သွားတွေ့ လိုက်ပါ။ အဆင်ပြေမဲ့ အချိန်လေးပါပဲ။ စီးပွားရေးမှာပုံမှန် လေးပါ။ ငွေကြေးကတော့ တဖြည်းဖြည်း ပြည့်စုံလာမဲ့ အချိန်လေးပါ။ အဆင်ပြေလာ မည်။ စက်ပစ္စည်း ဝင်လာမည် ။ အဝတ်အထည် အသစ်ဝင်မည်။ သူငယ်ချင်းများနှင့် ခရီးသွားရမည် အဆင်ပြေပါသည်။
ပညာရေး ကံကောင်းလာမည်။ အချစ်ရေးမှာ နီးမလိုလိုနဲ့ ဝေးနေရမည်။ အိမ်ထောင်ရေးမှာကတော့ စကားများနေရမဲ့ အချိန်လေးပါပဲ။ ကျန်းမာရေးမှာ ခေါင်းမူး ၊ ခေါင်းကိုက် ဖြစ်နေမည်။ ယတြာ = ဆင်းရဲ့သောသူ
တစ်ယောက်ကို ဆပ်ပြာလှူ၍ကံကောင်းလာစေရန်အတွက် ဆုတောင်းလိုက်ပါ။ အကျိုးပေးသော ဂဏန်း ။ ။7103
ဒီလအတွင်း မိမိရဲ့ စိတ်ကူးလေးတွေဟာ အချိန်တွေ အရမ်းကြာမှ ဆန္ဒလေးတွေ ပြည့်စုံလာမယ်။ လွယ်လွယ်လေးနဲ့ အဆင်မပြေသေးပါဘူး အလုပ်အတွက်နဲ့ စီးပွားရေးအတွက်နဲ့ ပုံမှန်လေးပြုလုပ်သင့်တဲ့ အချိန်လေးပါပဲ။ ယခုလအတွင်း သူများတွေနဲ့ အထက်လူကြီးတွေနဲ့ စကားပြောဆိုတာတို့ အဆင်မပြေတာတွေ ဖြစ်နေမည်။
အလုပ်အကိုင် လုပ်ကိုင်တာတို့ အဆင်ပြေပါသည်။ အလုပ်အကိုင်စီးပွားရေး ငွေကြေးကိစ္စများ ပုံမှန်လေးပါပဲ။ တဖြည်းဖြည်း ပြည့်စုံလာမှာပါ။ စိတ်မညစ်ပါနဲ့။ ပညာရေး ကြိုးစားနေရမည်။ ခရီးကိစ္စများ သွားလာမှုများ သွားလိုက်ပါ။ အဆင်ပြေပါသည်။
အချစ်ရေးမှာ ရည်ရွှယ်နေပေမဲ့ အဆင်မပြေပါဘူး။ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ လိုက်ဖက်ညီနေပါတယ်။ ယခုလ ကျန်းမာရေးမှာအိပ်ရေးပျက်တာတို့ စိတ်ပင်ပန်း တာတို့ဖြစ်နေမည်။ ယတြာ=ဗုဒ္ဓ္ဓဟူးနေ့ မိမိနေ့ နေအိမ်ဘုရားတွင် ပန်းကန်ပြားတစ်ချပ်တွင် ပန်းပွင့် ၉ ပွင့်ထည့်၍ အိမ်ဘုရားတွင် တင်လှူ၍ ကံကောင်းလာ စေရန် အတွက် ဆုတောင်းယူပါ။ အကျိုးပေးသောဂဏန်း ။ ။50 1 1
ဒီလအတွင်းမှာ ရည်ရွှယ်တာလေးတွေ အောင်မြင်နေမည်။ အလုပ်ကိစ္စများ စီးပွားရေးကိစ္စတွေမှာတော့ အဆင်ပြေလာမည်။ အထက်လူကြီးနဲ့ အတူတူပြုလုပ် ဆောင်ရွှက် တာတွေ သိပ်အဆင်မပြေဘူး ဖြစ်နေပါသည်။ အလုပ်ထဲ စိတ်မပျော်ပဲ အလုပ်လုပ်နေရမည်။
လူတစ်ခြား စိတ်တစ်ခြား ဖြစ်နေတာပါ။ငွေကြေးကိစ္စတွေမှာ အဆင်မပြေသေးပါဘူးဗျာ မရခင်ကကုန်ကုန်နေလို့ စိတ်ညစ်နေရမည်။ ငွေကတော့ ဝင်လာမှာပါ။ ခရီးကိစ္စများ သွားလာမှု အဆင်မပြေသေးပါဘူး။ ဒီလအတွင်း စနေသားသမီးများ အပြောင်းအလဲ တစ်ခုခုဖြစ်မည်။
ပညာရေး ကိစ္စများ အကူအညီပေးသူ ပေါ်လာမည်။ အချစ်ရေးကတော့ လွမ်းနေရမည်။ အိမ်ထောင်ရေးကတော့ ရန်ဖြစ်နေမည့် အချိန်လေးပါ။ အခုလ ကျန်းမာရေး အနေနဲ့ ဦးခေါင်းပိုင်း ကျန်းမာရေးညံ့မည်။ ခေါင်းမူးတာတို့ ဖြစ်မည်။ ယတြာ = အုန်းညွန့် ၃ ညွန့်ကို ကြာသပတေးနေ့ နံနက် ၉ နာ၇ီ ၄၅ မီနစ်တွင် မိမိရဲ့အိမ်ဘုရားတွင် တင်လှူရင်း လိုရာ ဆုတောင်းယူပါ။ ကံကောင်းလာမည်။ အကျိုးပေးသော ဂဏန်း ။ ။2590
ဒီလအတွင်းမှာ မိမိလိုချင်သော ဆန္ဒတွေအားလုံး သူများကူညီပေးလို့ အဆင်ပြေလာမည်။ စိတ်မောလူမောနဲ့ လုပ်နေရတဲ့ ကိစ္စများ စိတ်ချမ်းသာမှုများ ရရှိလာမည်။ အလုပ်အကိုင်များ အရင်ထက် လုပ်ကိုင်ဆောင် ရွက်နေရမည်။ အထက်လူကြီးများနဲ့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွှက်မှုများ အဆင်ပြေမည်။ စီးပွားရေး ငွေကြေးကိစ္စများ ကူညီဆောင်ရွှက်ပေးသူ ပေါ်မည်။ ရုတ်တစ်ရက် ငွေကြေးကိစ္စများ အဆင်ပြေနေမဲ့ အချိန်လေးပါ။
ပညာရေး ဆက်လက် အောင်မြင်မှုများ ရရှိလာမည်။ခရီးတွေကတော့ သူငယ်ချင်းများ မိတ်ဆွေများနဲ့ သွားရမည်။ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများနဲ့ ဆုံတွေ့ရမည်။ ပညာရေး အဆင်ပြေနေမည်။ အချစ်ရေးမှာ ပျော်ရွှင်သော အချစ်ကို တွေ့ရမည်။ အိမ်ထောင်ရေး အဆင်ပြေပါသည်။ ကျန်းမာရေးမှာ စိတ်ပင်ပန်းနေမည်။ ခါးနာ ၊ မျက်စိအားနည်း ဖြစ်နေမည်။ ယတြာ = သောကြာနေ့ မိမိနေအိမ် ဘုရားတွင် ရွှေရောင် ပန်းကန်ပြားထဲတွင် သင်္ဘောသီး တစ်လုံးတင် လှူ၍ ကံကောင်းလာစေရန် အတွက်ဆုတောင်းယူပါ။ ဒီလအတွက် အကျိုးပေးသော ဂဏန်းများမှာ ။ ။ 197 5
ယခုလအတွင်း ကံကောင်းနေသော အချိန်လေး ဖြစ်ပါသည်။ မိမိရည်ရွယ်နေသာ စိတ်ကူးများ အဆင်ပြေလာမည်။ စနစ်တကျနဲ့ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွှက်လိုက်ပါ။ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ တိုးတက်အောင်မြင်မှု ရှိလာမည်။ စမ်တူကိစ္စများ အထက်လူကြီးတွေနဲ့ ပြုလုပ်သော ကိစ္စများတွင် ငြိုငြင်မှုခံရမည်။ သတိထားပါ။ ငွေကြေးကိစ္စများ အဆင်ပြေနေသာအချိန်လေးပါ။ ရအောင်သာ စုပေတော့ ကူညီသူ ပေါ်မည်။
မိသားစု အိမ်တွင်းရေး ကိစ္စများ ကောင်းသော အပြောင်းအလဲ တစ်ခုခု ဖြစ်ပေါ်မည်။ပညာရေး မှာ ကြိုးစားအားထုပ်မှု နည်းနေသော အချိန်လေး ဖြစ်ပါသည်။ ခရီးသွားမည့် ကိစ္စများ အဆင်မပြေသေးပါ။ ပညာရေး အားနည်းနေမည်။
အချစ်ရေးမှာ အဆင်ပြေနေသော ဘဝလေးသို့ ပြသာနာများ ဝင်ရောက် လာမည်။ ဒီလအတွင်း အိမ်ထောင်ရေးမှာ မိသားစု ပျော်ရွှင်နေမဲ့ အချိန်လေးပါပဲ။ ကျန်းမာရေးမှာ ခေါင်းမူး ၊ ခေါင်းကိုက် ဖြစ်မည်။ ယတြာ = စနေနေ့ မိမိနေအိမ် ဘုရားတွင် သရက်သီး ၃ လုံးကို ကပ်လှူ၍ ကံကောင်း လာစေရန်အတွက် ဆုတောင်းလိုက်ပါ။ ဒီလအတွက် အကျိုးပေးသော ဂဏန်းများမှာ ။ ။23 8 5
2012 - March လတွင် မိမိရဲ့ဘဝလေး များလည်း (၁၁) မီးငြိမ်း၍ အေးချမ်းပါစေ။ ဆက်သွယ်ရန် - ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ ၏ တပည့် - ဆရာမျိုးဟန်ကို - NO. 314 , Block P/B , Jin Cheras Taman Cheras ,56100 Kuala Lumpur Malaysia - http://www.myohanko.br.ms - myohankonew@gmail.com - Ph; 017, 226 0715 - စေတနာ မှန်၍ စိတ်ကောင်း ထားတတ် သူတိုင်း ကံကောင်း ကြပါစေ။
Posted in: လစဉ်ဗေဒင်
အရမ်းချစ်ပါတယ် .. မြတ်နိုးပါတယ်ချစ်သူ... နဖူးကနေခြေဖျား.... ရင်ထဲကစကားတွေပါ... တစ်ကိုယ်တည်း.. အထီးကျန်သူအတွက်... အကျည်းတန်တဲ့.. ရက်တွေမ...
နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမားနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဂီတဖျော်ဖြေပွဲ အစီအစဉ် မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်ကျင်းပ
ရွှေမြန်မာလမ်းညွှန်မှ စီစဉ်တင်ဆက်သော နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမားနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဂီတဖျော်ဖြေပွဲကို May Day နေ့ 1.5 .2012 နေ့လေးတွင် နေ့လည် ၂ နာရီမ...
ရက်စက်တဲ့....ဒီည... ခဝါချလဲမပြေ... အလွှာချလဲမကြွေ.. လေယူလေသိမ်းနဲ့... အပြီးသိမ်းတဲ့ပွဲမှာ.... ဒီလေညှင်းက.. ငါ့ရင်ခွင်ကိုမှ ထိရှစေသတဲ့လ...
တည့်ပြီဆိုမှ လွှတ်လိုက်တာ မတော်တဆလွဲချော်မှုကြောင့် ငါနဲ့ ဘဝကလွဲပြန်ရော(မနေ့ကလိုပါပဲ) မရေရာခြင်းမှာ သေချာခြင်းတွေ အပြည့်အဝရှိကြောင်း တိုင်း...
Free Online Radio Media (Malaysia News) ပထမဆုံး မြန်မာ အွန်လိုင်း ရေဒီယို အစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ ဖရီး မလေးရှား အွန်လိုင်း ရေဒီယို အစီအစဥ...
Happy New Year 2012 အတွက် အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံလက်ဆောင်များ နှင့် အင်တာဗျူး အစီအစဉ်
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ ပျော်ရွှင်သော နှစ်သစ်လေး ဖြစ်ပါစေ ခင်ဂျာ။ ဒီနေ့ ညလေးဆို 2012 ကို ပြောင်းတော့ မယ်နော် .... နှစ်သစ် အကြောင်းအရာ လေးတွေကို ...
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ဇူလိုင် ၁၅ရက် အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် စာပေဟောပြောပွဲ ကျင်းပမည်
ခေါင်းလောင်းသံ ရသစုံ သတင်းနှင့် ရုပ်သံဂျာနယ်မှ ဦးစီးကျင်းပသော (အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ်) အထိမ်းအမှတ် အနေဖြင့် စာပေဟောပြောပွဲ အစီအစဉ်ကို မလေ...